Furayaasha mustaqbalka HTC 11, calanka soo socda ee Taiwan | Androidsis
Google Pixel wuxuu ku khasbanaaday baalal sii HTC markay ogaadaan markay doonayaan, waxay awoodaan inay naqshadeeyaan boosteejooyin waaweyn. Ugu yaraan markay kaa dhaafaan nashqadda waxa la doonayo si ay u soosaaraan una soo diraan sidii loogu amray. Markaa waa inay helaan uun habka saxda ah ee loogu talagalay HTC 11 ee soo socota si ay u helaan tirooyinka iibka ee ka wanaagsan 10.
HTC 11 wuxuu bilaabmayaa inuu sameysto waana kan caanka ah ee Evan Blass oo horeyba u sheegay baddu waa mid dhab ah taas oo durba kujirta wajigii lagu yaqaanay inyar kadib. Soo-saaraha reer Taiwan wuxuu rajeynayaa inuu soo saaro horraantii 2017. Isla MWC-ga Barcelona ka dib, wuxuu noqon lahaa taariikhda ugu habboon ee taleefankan.
1 Qiimaha iyo noocyadiisa
2 Naqshadaynta HTC 11
3 Sawir qaade
4 Processor iyo khibradaha
Qiimaha iyo noocyadiisa
Qiimaha waxaa laga filayaa in kudhowaad 700 oo doolar, wax aan cidna la yaab ku noqonaynin, maadaama HTC marwalba aad uga madax adagaa qiimaha. Waxay noqon doontaa wax la yaab leh haddii qiimaha uu hoos u dhaco, in kasta oo ay waliba qayb ahaan macquul noqonayso sababo la xiriira dhibaatooyinka halista ah ee iibka ee dhacay muddooyinkii u dambeeyay.
HTC 11, ama loogu yeero gudaha sida HTC Ocean, waxaa ku jiri doona saddex nooc: Ocean Master, Ocean Note iyo Ocean Smart. Kuwani waxay noqon doonaan saddex nooc oo aanan garanaynin dareenkooda iyo haddii ay jiri doonaan “fikrad” dhexdooda ah, sida berri ku dhici doonta taleefan sharaf cusub ama Xiaomi Mi MIX oo guul u ah shirkadda Shiinaha.
Waxa aad u cad ayaa ah in seddexdan nooc ay yeelan doonaan cabirro kala duwan si uu isticmaalehu u awoodo dooro mid adiga kugu habboon maalin walba maalintiina noloshaada dhijitaalka ah.
Naqshadaynta HTC 11
Haddii aan ogaanno taas Galaxy S8 wuxuu sameyn lahaa la'aan badhanka guriga, HTC waxay umuuqataa inay kusocoto fiidiyowgaas fikradda ah ee HTC Ocean kaas oo kontaroolada jireedku ku baaba'aan waxayna muujineysaa waxay noqon laheyd interface Sense Touch. Sidee u xiiseynayaan iyo sida madax adayga Samsung iyo HTC ay ula joogeen badhamadaas jirka ah markii labo ama seddex sano Google ay ku qasbeysay inay badalaan maskaxdooda. Sannadka 2017 waxaan arki doonnaa taleefannadooda calanka oo aan lahayn badhannada guriga.
Haysashada taleefan aan lahayn badhanno muuqaal ahaaneed waxay la micno tahay haysashada HTC 11 oo ku tiirsanaan doonta tilmaamaha, taabashada iyo codka si ay ula fal gasho taleefanka casriga ah. waxaan rajeyneynaa taas HTC wuxuu iftiinka ku arkay Kaaliyaha Google wajiga wax soo saarka ee terminalka si loo ogaado in ay tahay in 100% lagu daro qaybtiisa dhamaadka sare ee cusub.
Aan rajeyno a jirka bir buuxa iyo caabbinta biyaha sida LG G6 iyo Galaxy S8 ay yeelan doonaan. Wax yar ayaan ka ognahay marka laga reebo noocyadaas iyo astaamaha shaashadda 10-ka oo leh 5,2 inji iyo Quad HD xal. Hal qarsoodi ayaa ah in gudigu AMOLED noqon doono.
HTC 11 wuxuu yeelan doonaa qaabeyn laba-geesood ah haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno fikradda muuqaalka ah. In kasta oo hadda ay tahay dhammaan soosaarayaasha, marka laga reebo Samsung, yaa waxay ku fuulayaan baaskiilka qaabeynta laba-geesoodka ah kaamirada, sidaa darteed wax walba waan filan karnaa. Hadday sidaas tahay, qaabeynta ugu habboon waxay noqon doontaa mid la mid ah tan 'P9' ee Huawei si loo helo mid labaad oo loogu talagalay sawirrada monochrome.
Processor iyo khibradaha
Layaab malahan in HTC ay leedahay Qualcomm Snapdragon 835, maadaama calankeeda ay waligeed ku tiirsaneyd astaantaas. Waxaan arki karnaa 4 GB oo RAM ah, nooca USB-C iyo luminta qalabka codka sida ku dhacday HTC Bolt.
Haysashada Nougat, HTC 11 wuxuu ku dhowaan karaa khibrad nadiif ah oo Android ah taas oo ah Kaaliyaha Google runtii waa la isku daray oo u oggolow isdhexgal dabiici ah codka. Inbadan haddii ay suurta gal tahay, haddii aan ka hadlayno terminal aan lahayn badhamooyin jireed. Waxay noqon laheyd guul dhameystiran, maadaama waqtiga ay suuqa kujirto, Kaaliyaha Google si wanaagsan ayaa loo ogaan doonaa waana laga dhisnaan doonaa sida uu hada yahay
Waan arki doonnaa halkaas oo HTC 11 isku raacsan yahay, laakiin haddii aad neefsan kartid hawo nadiif ah oo ay ku siisay Google Pixel, waxaad ugu dhawaan kartaa taleefan ay aad u wada jecel yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » Furayaasha HTC 11, ama gudaha looga yaqaan HTC Ocean
Google waxay isticmaali doontaa 100% tamarta la cusboonaysiin karo sanadka 2017